gaabinta : AAD
aasaasay : 2012
Ha iloobin in aad wada hadlaan Torrens University Australia
Qorto Torrens University Australia
Torrens University Australia waa jaamacad gaar loo leeyahay oo la goobood oo Adelaide, Sydney, Melbourne iyo Brisbane. Waa qayb ka mid ah network Nobelka International Jaamacadaha iyo waa jaamacad gaar loo leeyahay saddexaad ee Australia.
Jaamacadda ayaa waxaa rasmi ah u furay hore ee laga xoreeyo. Madaxweyne Bill Clinton xarunta Adelaide Festival oo ku saabsan 24 July 2014.
Ku soo dhawaada Jaamacadda caalamiga ah ee Australia. Torrens University Australia waxay keentaa cusub a, casri ah, xirfadaha-diiradda iyo aragtida caalamka in ay waxbarasho sare. Halkan waxa loola jeedaa in aad loogu talagalay.
Torrens University Australia waa jaamacad kulan-beddelo ah, loogu talagalay bixinta qalin la set oo ah mid caalami ah u janjeedha xirfad in iyaga ka dhigi doonaa badeecad qiimo leh in loo-shaqeeyahaaga kasta oo.
Torrens bixisaa xirfadeed, Koorsooyinka undergraduate iyo postgraduate guud design, ganacsi, Maamulka mashruuca, maamulka isboortiga, waxbarashada iyo caafimaadka. Koorsooyinka waxaa loo samatabbixiyey dhex qoyska Torrens 'cajiib ah dugsiyo iyo soo diyaariyeen a haybadda leh ee iskaashi; hay'adaha taasoo keentay in dhammaan faano links xoog leh warshadaha oo ay labaatan sano oo waayo aragnimo ah la baro in Australia iyo dibada.
waayo-aragnimo Torrens waxaa si qoto dheer diiradda bixinta waddo ah xagga shaqada abaal ku haboon doonaa hab nololeed ee ardayda.
Torrens wuxuu bixiyaa nidaam hufan bilood ogolaanaya koorsooyinka in la dhameystiro badan dhakhso badan qurbaanno jaamacadaha dadweynaha. Ardayda waqti-buuxa caadi ahaan qaataan 3 muddo daraasad la duration ah 12 todobaad kasta, kaas oo awood u dhamaystirka shahaado bachelor 3 sano gudahood 2 sano.
Torrens ayaa xarumood ee Sydney, Adelaide, Melbourne iyo Brisbane, bixiya habboonaan ee online iyo ardayda campus in la isticmaalo goobaha campus markuu u habboon, la Sydney iyo Brisbane dhamaystiran leh ka dib markii goobaha saacadood oo waxbarasho. Meel alaale meeshii suurtogal, Torrens bixisaa koorsooyin ay online in ay bixiyaan habboon in ardayda aan ku nool magaalo-madaxyada Australia ee helitaanka.
Waxa kale oo ay bixisaa waddo macquul ah in xirfadlayaasha la aasaasay kuwaas oo inta badan ku dhaqmo trifecta ah shaqada, qoyska iyo ballanqaadyada shakhsi todobaad kasta. Torrens 'Touch dhibcood' fadhiyada todobaadkan degdeg ah siiyaan fursad si joogto ah loogu talagalay ardayda online in uu la kulmo macalimiinta iyo fasalka ay ku campus iyo gunta galay mowduucyo bartay guriga. Ardayda waxaa sidoo kale ay taageerayaan madal waxbarasho online gobolka-of-the-art.
Horumarada Swift ee technology iyo sii kordhaya ururada caalamiga ah ayaa keentay in dunida ah, halkaas oo ka qalin of taacliinta oo dhan u baahan doontaa xirfadaha iyo aqoonta ay u tartamaan suuqa shaqooyinka caalamiga ah. Iskaashi dhex technology oo loo marayo arinkii caalami ah waa qayb ka mid ah qiyamka asaasiga ah Torrens '. meel Torrens 'ee Nobelka International Jaamacadaha ayaa sidoo kale hubisaa in ardayda la degree ka badan qalin, graduate ka network ugu weyn ee waxbarashada adduunka, diyaar u ah wax kasta oo caqabad ku dunida jidkooda gana.
CILMI SHAHAADADA SARE
Codsiga ka Nobelka Waxbarashada Asia si ay u heleen Jaamacad gaar loo leeyahay lagu ansixiyay Dowladda South Australia ee October 2011.
The go-hor jaamacad cusub waxaa loo soo dhiibay golaha South Australia ka dib markii wadahadalo Premier Mike Rann ee Australia iyo in Cancun, Mexico, iyadoo Gudoomiyaha Nobelka Douglas Becker oo Chancellor Dr Michael Mann. Sharafeedka Nobelka Chancellor iyo madaxweynihii hore ee Maraykanka Bill Clinton si cad u taageeray mashruuca Australia.
“fursad ay ku bartaan jaamacadda isla guud ahaan dal oo kala duwan waa muhiim in our dunida sii xiran. Waxaan ku hanweynahay inaan booqanaya campus Nobelka cusub ee Adelaide,” Madaxweynihii hore ayaa sheegay in Clinton.
Torrens University Australia waxaa lagu aqoonsan by Agency Tayada iyo Heerarka Tertiary Waxbarashada ee 2012. Waxaa markii hore la filayay in la furo in 2013 laakiin bilaabay waxbarashada 2014.
Madaxweynaha ayaa aasaasay iyo Ku-xigeenka Chancellor ahaa Professor Fred McDougall, hore ee ku-xigeenka ku-xigeenka ahaa iyo madaxweyne ku xigeenka oo ka tirsan Jaamacadda Adelaide.
Ma rabtaa wada hadlaan Torrens University Australia ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Torrens University Australia rasmiga ah Facebook
dib u eegista Torrens University Australia
Ku biir si ay ugala hadlaan of Torrens University Australia.
University of Coast Sunshine ah shubay Downs